Inona ny vidin'ny fividianana mpanjifa Versus? | Martech Zone
Inona ny vidin'ny fividianana mpanjifa Versus?
Alarobia, Martsa 9, 2016 Douglas Karr
Misy fahendrena manjaka ankehitriny izay vidin'ny fahazoana mpanjifa vaovao mety 4 na 8 heny ny vidin'ny fitazonana iray. miteny aho fahendrena manjaka satria hitako fa ny statistika matetika no zaraina fa tsy mahita loharanom-pahalalana hiaraka aminy mihitsy. Tsy misalasala aho fa ny fitazomana ny mpanjifa dia tsy dia lafo loatra ho an'ny fikambanana, saingy misy ny maningana. Amin'ny orinasam-pifandraisana, ohatra, azonao atao matetika miady varotra - ny mpanjifa miala dia soloin'ny iray mahasoa kokoa. Amin'ity tranga ity, mitazona mpanjifa afaka mandany ny volan'ny orinasanao arakaraka ny fandehan'ny fotoana.
Na eo aza izany, ny ankamaroan'ny kajy dia lany andro noho ny fiantraikan'ny mpanjifa amin'ny ezakay mivarotra. Ny media sosialy, ny fijoroana vavolombelona an-tserasera, ny tranonkala hijerena ary ny motera fikarohana dia manome fiara fitaterana mahatalanjona ho an'ny mpanjifa vaovao. Rehefa afa-po ireo orinasa iarahanao miasa dia matetika no mizara izany amin'ny tamba-jotra na amin'ny tranonkala hafa. Midika izany fa ny fitazonana tsy dia tsara ankehitriny dia hisy fiatraikany ratsy amin'ny paikadinao amin'ny fahazoana azy!
Fampidinana mifanohitra amin'ny formula retention (isan-taona)
Taham-pifidianan'ny mpanjifa = (Isan'ny mpanjifa miala isan-taona) / (Isan'ny mpanjifa tanteraka)
Taham-pitanana ny mpanjifa = (Isan'ny mpanjifa tanteraka - Isan'ny mpanjifa miala isan-taona) / (Isan'ny mpanjifa tanteraka)
Sarobidy mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa (CLV) = (Tombom-barotra tanteraka) / (tahan'ny toetran'ny mpanjifa)
Vidin'ny fakana mpanjifa (CAC) = (Tetibola momba ny varotra sy ny varotra tanteraka misy ny karama) / (Isan'ny mpanjifa azo)
Vidin'ny safidy = (Sarobidy mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa) * (Isan'ny mpanjifa fanao isan-taona very)
Ho an'ireo olona mbola tsy nanao ireo kajy ireo, andao jerena ny vokany. Ny orinasanao dia manana mpanjifa 5,000, very 500 isan-taona, ary samy mandoa $ 99 isam-bolana ho an'ny serivisinao miaraka amin'ny tombony 15%.
Taham-pifidianan'ny mpanjifa = 500/5000 = 10%
Taham-pitanana ny mpanjifa = (5000 - 500) / 5000 = 90%
Sarobidy mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa = ($ 99 * 12 * 15%) / 10% = $ 1,782.00
Raha $ 20 isaky ny mpanjifanao ny CAC dia mafy orina izany fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing, mandany $ 10k hanoloana ireo mpanjifa 500 sisa. Fa ahoana raha azonao ampitomboina ny fihazonana 1% amin'ny fandaniana $ 5 isaky ny mpanjifa? 25,000 $ no laniny amin'ny programa fitazomana. Izany dia hampitombo ny CLV anao amin'ny $ 1,782 ka hatramin'ny $ 1,980. Nandritra ny androm-piainan'ny mpanjifanao 5,000, vao avy nampitombo ny faran'ny farany efa ho iray tapitrisa dolara ianao.
Raha ny marina, ny fiakarana 5% amin'ny tahan'ny mpanjifa # retention dia mampitombo ny tombony amin'ny 25% ka hatramin'ny 95%
Mampalahelo fa, araka ny angon-drakitra voasambotra momba izany infographic avy amin'ny Invesp, 44% amin'ireo orinasa no mifantoka bebe kokoa amin'ny # fahazoana raha 18% ihany no mifantoka amin'ny # retention. Ny orinasa dia mila manaiky fa ny atiny sy ny paikadim-piaraha-monina matetika dia manome lanja bebe kokoa amin'ny fomba fitazonana noho izy ireo mahazo.
Tags: fahazoana mifanohitra amin'ny retetentionVidin'ny safidyny vidin'ny mpanjifafahazoana mpanjifa mifanohitra amin'ny fitazomanaTaham-pifidianan'ny mpanjifasandan'ny androm-piainan'ny mpanjifafitazonana ny mpanjifatahan'ny fitazonana ny mpanjifaSary torohayinvesp
Kompas: Jereo ny fihetsika mitarika ny fihazonana ny mpanjifa
20% mahery amin'ny tsindry an-tranontsika dia avy amin'ny endrika iray
Mar 10, 2016 amin'ny 1: 13 AM
Ity no fampahalalana tena notadiaviko. Misaotra anao nizara ny fahaizanao!
Mar 15, 2016 ao amin'ny 12: PM PM
Feno fankasitrahana aho fa namaky ny lahatsoratrao. Hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitro amin'ny raharaham-barotra izany. Tena mila mikarakara ireo tsy mivadika amintsika isika.